Khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay Xagaagii Carabta - BBC News Somali
Khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay Xagaagii Carabta
Image caption 600 oo bilyan oo dollar ayay waddamada ku waayeen Xagaagii Carabta
Daraasad ay samaysay Qaramada Midoobay ayaa lagu ogaaday in dibed baxyadii ka dhacay waddamada Carabta ee loo bixiyay Xagaagii Carabta, iyo cawaaqibkii ka dhashay ay gobolkaasi ka lumiyeen lacag ka badan 600 oo bilyan oo dollar.
Gudiga Qaramada Midoobay u qaabilsan Dhaqaalaha iyo Arrimaha Bulshada ee Galbeedka Aasiya, ayaa sheegay in qiyaastaasi uu ku saleeyay sadaashii dhaqaale ee la sameeyay sanadkii 2011, markaasi oo ay billaabanayeen dibed baxyadii Bariga Dhexe.
Gudiga ayaa sheegay in lacagtaasi ay u dhiganto ku dhawaad boqolkiiba lix dhaqaalaha guud ee gobolkaasi.
Waxa uu sheegay in saadaasha dhaqaalaha ay inta badan muujiso in isbedel ku yimaada maamulka talada haya, uu dhaliyo kobac dhaqaale iyo shaqooyin badan oo abuurma mustaqbalka fog.
Balse warbixinta ayaa lagu sheegay in gobolka Carabta aanu saadaashaasi waafaqin.
Guushii hore ee laga gaaray dibed baxyadii ka dhacay inta badan dalalka Carabta, ayaa markii dambe isu bedeshay amni darro, xaaladaha qaar sida dalalka Liibiya, Suuriya iyo Yemen-na waxa ayba ku dambeysay dagaal sokeeye.
Dhaqaalaha dalalka kuwaasi deriska la ah ayaa waxaa sameeyay colaadahaasi.
Qaar ka mid ah waddamadaasi deriska ah ayaa la tacaalaya qaxooti badan oo kusoo jabay, halka amni darradana ay si ba'an u saamaysay dalxiiska gobolka, kaasoo waayay maalgashi dibedda uga yimaada.